Echinoctius Andiany Divay Voafetra - Famolavolana
Andiany Divay Voafetra
Andiany Divay Voafetra Ny tetikasa ity dia tsy manam-paharoa amin'ny fomba maro. Ny famolavolana dia tsy maintsy taratry ny toetran'ilay vokatra tokana - divay mpanoratra manokana. Ankoatr'izay, nisy ny fepetra takiana amin'ny fampitana ny dikany lalina amin'ny anaran'ny vokatra - ny superlative, solstice, ny mifanohitra amin'ny alina sy ny mainty ary ny fotsy, misokatra ary tsy hita maso. Ny fikasana dia ny hanana taratra ny tsiambaratelo nafenina amin'ny alina: ny hakanton'ny lanitra amin'ny alina izay manaitra anay tokoa sy ny ankamantatra mystic miafina ao amin'ireo antokon-kintana sy ny Zodiaka.
Anaran'ny tetikasa : Echinoctius, Anaran'ny mpamorona : Valerii Sumilov, Anaran'ny mpanjifa : SHUMI LOVE DESIGN (TM).
Andiany Divay Voafetra Valerii Sumilov Echinoctius